Sawirro: Taangiyada Turkiga oo daawanaya magaalo xasuuq looga cabsi qabo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Sawirro: Taangiyada Turkiga oo daawanaya magaalo xasuuq looga cabsi qabo
A warsame 8 October 2014 8 October 2014
Mareeg.com: Iyadoo muddo labo todobaad ka badan uu dagaal xoog leh ka socda magaalada Kobane ee ku taalla xadka Turkiga iyo Suuriya ayaa ciidamada Turkiga oo wata gaadiid dagaal iyo taangiyo farabadan waxey ku suganyihiin xadka labada waddan balse wax tallaabo ah ma aysan qaadin.
Magaaladan dagaalku ka socda waxaa dadka Kurdiyiinta ugu yeeraan magaca Kobane, halka Carabtu u yaqaanaan Ceynul Carab, waxaana halkaas ku dagaallamaya maleeshiyaad kazoo jeeda Kurdiyiinta Suuriya iyo dagaalyahanada Khalaafada Islaamiga ah ama IS.
Kooxda khilaafada islaamiga ay gudaha u galay qeybo ka mid ah magaaladaasi kaddib saddex usbuuc oo ay ku hareereysnaayeen magaaladaasi, waxeyna calnkooda ka taagteen buur saran magaalada.
Asya Cabdullahi oo ka tirsan saraakiisha Kurdiyiinta oo ku sugan gudaha magaalada ayaa sheegtay in dagaal uu ka socdo saddex degmo oo magaaladaasi ka tirsan kaddib markii ay kooxdaasi calankooda ka taageen bariga magaalada.
Waxa ay ku eedeysay kooxda khilaafada islaamiga in ay adeegsanayaan hub aad u culus, waxa ayna ka digtay in halkaasi uu xasuuq ka dhici karo haddii xoogagga uu mareykanka hor kacayo aysan duqeymo halkaasi ka geysan.
Dadka magaalada ayaa bilaabay iney u cararaan dhanka dalka Turkiga, iyadoo laga cabsi qabo in halkaas gumaad ka dhaco haddii Khalaafadu magaalada la wareegto.
Dagaalyanada Kurdiyiinta ee reer Suuriya ayaa ku adkeysanaya iney magaalada ka difaaci doonaan IS, iyagoo dagaalka waddooyinka halkaas weli ka wada.
Dhan kale, Ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan Suuriya ayaa caalamka ugu baaqay in kooxda khilaafada islaamiga laga difaaco magaalada Kobane.
Ergeygan oo lagu magacaabo Steffan De Mistura ayaa BBC-da u sheegay in qabsashada magaalada Kobane ay dhalin karto xasuuq, sidoo kalena ay khatar ku noqonayso dalka dariska ah ee Turkiga.
Dhanka kale, ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay dalka Turkiga kaddib dibadbaxyo ay kurdiyiinta ka dhigeen magaalooyinka dalkaasi, kuwaasi oo ay ku dalbanayeen in la difaaco magaalada Kobane.
Bileyska ayaa isticmaalay sunta indhaha ilmada ka keenta, waxaana rabshadahani ay ku sii baahayaan magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Ankara iyo Istanbuul.
Cabdi Qeybdiid: Puntland waxey dhaqaale siisaa koox dumarka kufsada iyo burcad
Midowga Yurub oo Siilaanyo ku adkeeyey inaan doorashada dib loo dhigin